Betsaka ny marary na any amin’ny hopitaly na any an-trano amin’izao vanim-potoana izao. Manoloana ny tsy fisian’ny taxi-be sy ny halafosan’ny saran-dalana amin’ny taxi anefa, tena ilaina ny dokotera afaka mitsidika any an-trano. Ny marary rahateo reraka raha mbola andeha an-tongotra ka betsaka ireo miangavy dokotera hanatona any an-tokantrano hizaha fahasalamana ny marary.
Vitsy ihany anefa ireo dokotera manao izany tolotra mandeha any an-tokantrano izany. Tamin’ity firongatry ny valanaretina ity kosa, maromaro ireo nanana fahafoizan-tena manatona ny marary mihitsy na andro na alina antsoina.
Hidina ny maripana ambany amin’ny atitany rehetra, raha tombanana hiakatra kosa ny ambony indrindra mandritra ny telo andro ho avy, araka ny fanambaran’ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro, omaly. Ho an’Antananarivo, eo anelanelan’ny 10 sy 21°C ny maripana raha 5°C sy 22°C kosa any Antsirabe. Manan-kery hatrany kosa hatramin’ny omaly alina ny filazana fampitandremana momba ny haavon’ny alondrano eo anelanelan’i Cap d’Ambre sy Mahanoro. Mety hihoatra ny 3 hatramin’ny 4 metatra ny haavon’ny onja ary ahina hitera-doza, indrindra ho an’ny mpanjono madinika. Iangaviana ny mpampiasa ranomasina tsy hivoaka eny an-dranomasina ary hanaraka ny toromarika omen’ny manampahefana eny ifotony.
Nanomboka omaly ny fanamboarana ny efitrano lehibe ao amin’ny Lapan’ny kolontsaina sy fanatanjahantena Mahamasina handraisana ny olona mitondra ny tsimokaretina Coronavirus. Ny miaramila no hisahana ny fikarakarana ny toerana sy hifandray mivantana amin’ny marary. Nomena fiofanana izy ireo ka hizara andiany
telo, ahitana 30 olona isan’andiany. Fiarovana ny tena sy ny fahadiovana no niompanan’ny fiofanana. Hasiana fandriana 300 ny toeram-pandraisana hanampy ny eny amin’ny LTP Alarobia.